Microsoft Windows dia hanatitra 10 maimaim-poana in Jolay - News Fitsipika
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Microsoft Windows dia hanatitra 10 maimaim-poana in Jolay” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 1 Jona 2015 09.13 UTC
Windows 10 dia ho afaka ho toy ny vaovao maimaim-poana amin'ny 29 Jolay, Microsoft dia nanambara.
Ho lehibe ny farany famoahana ny 29 taona miasa rafitra eo anatrehan'i Microsoft Switches ny "Windows toy ny fanompoana" rafitra, izay mitaky ny vaovao farany rehefa nanakodia avy, rehefa vonona.
Izany no manamarika ny fiovana eo amin'ny Microsoft ny fandraharahana modely. Ny rafitra fandidiana ho natolotra maimaim-poana ho fanavaozana ho an'ny mpampiasa ny Windows 7 ary Windows 8.1 ao anatin'ny taona voalohany.
Tsirairay dikan-Windows manana sandan'ny maherin'ny £ 100, Na ny ankamaroan'ny mpampiasa Windows mandray dikan vaovao ny rafitra fandidiana, rehefa mividy solosaina vaovao, fa tsy amin'ny Hanavao ny rindrambaiko-tena.
Microsoft nanao Windows 8.1, izay naverina tamin'ny laoniny ny Start voalaza, ho toy ny vaovao maimaim-poana ny Windows 8. Windows 10 haveriko mahazatra kokoa singa avy amin'ny Windows 7 ary mitambatra azy tamin'ny fijery maoderina ny Windows 8.1.
Mihoatra ny 4 tapitrisa no beta mizaha toetra ny topi-maso ny Windows-bahoaka 10 nandritra ny roa volana, manampy Microsoft manamboatra ny olana alohan'ny famotsorana. Vao haingana ny tatitra milaza fa Windows 10 Lavitra vonona, miaraka amin'ny bibikely sy ny glitches maro mbola tsy raikitra.
Ny fametrahana ny daty ho an'ny famotsorana afaka manampy hanafaingana ny fampandrosoana tsingerin'ny, fa izany no zava-dehibe fa ny voalohany Microsoft-bahoaka ankalamanjana ho an'ny Windows 10 dia mafy orina mba tsy fampitahana amin'ny bibikely-nolavadavahana Windows Vista avy 2006.
Microsoft ny fahari-naneso Internet Explorer, no ho solon'ny Edge amin'ny Windows 10, raha ny rafitra fandidiana Mampanantena hampiraisana ny Windows tontolo iainana ny fampiharana sy ny tolotra manerana biraonao, laptop sy ny takelaka PCs ary koa ny finday avo lenta.
Microsoft ny feon'ny-maso Hafanàm-po an mpanampy, Cortana, Hampaharitra ny bitany mihoatra noho finday avo lenta miaraka amin'ny Windows 10, hifaninana amin'i Apple ny Siri sy Google ny Ankehitriny. Microsoft vao haingana dia nanambara fa Cortana koa ho azo ny iPhone sy ny fitaovana Android.
Ny Redmond-miorina rindrankajy orinasa mila Windows 10 mba ho hira na amin'ny mpanjifa sy ny orinasa taorian'ny zava-tsarotra eo amin'ny fandresena lahatra ny fikambanana mba hanatsarana avy any amin'ny 14 taona Windows XP.
Na dia eo aza Windows XP satria mihoatra noho ny taona avy amin'ny fanohanana, fanaovana solosaina marefo ny hanafika mpijirika, maro an'arivony ordinatera no mbola mihazakazaka izany ao amin'ny UK, ao anatin'izany ny 2,600 PCs nampiasain'ny NHS Scotland.
59906	9 Article, Computing, Microsoft, News, Samuel Gibbs, Software, Teknolojia, Windows, Windows 10
← Ny vatan'olombelona mahagaga - saingy tsy manana antoka ny androm-piainany Ahoana masonao hamadika ny hevitrao →